दादागिरी शैलीमा मध्य साउनमा पनि गिटी उत्खनन् गर्दैछन् भिम पौडेल - Pradesh Dainik
सोमबार, साउन २६, २०७७ , प्रदेश दैनिक
पथरी, पुर्वका चर्चित खोला ठेकदार भीमबहादुर पौडेलका स्काभेटरले मध्य साउनमा पनि दादागिरी शैलीमा खोला उत्खनन् गरेको पाइएको छ । पौडेलले स्थानीय वासिन्दालाई प्रयोग गरेर दिन दहाडै मोरङको लेटाङ स्थीत तेलि खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरि गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरेका हुन् ।
केही दिन अघिदेखि पौडेल सहितका ठेकेदारहरुका हाइवा र ट्रिपर दोहोरीलत्त कुदेपछि पथरी जाँते सडकमा एम्बुलेन्स सम्म फस्ने अवस्थामा पुग्यो । सडकको यस्तो अवस्था भएपछि पटक पटक स्थानीयले पौडेललाई सडकमा गिटी हाल्न भनेका थिए । स्थानीयको आवाजलाई बेवास्ता गरेका पौडेलको क्रसरका गाडी बाटैमा रोकिदिएपछि पौडेलले बाटामा गिटी हाल्ने सर्तमा छाडिएको थियो ।
सोही विषयलाई बाहना बनाएर पौडेलले तेली खोलमा स्काभेटर लगाए र २ सय टिप भन्दा बढि नदिजन्य सामग्रीको दोहन गरेको स्थानीयले बताएका छन् । खोलाबाट पौडेलको श्री ओम क्रसर उद्योगको स्टक २० मिटर आसपासमा छ । स्टक सामानबाट बाटो पुर्न स्थानीयले पौडेललाई अनुरोध गरेका थिए तर पौडेलले मध्य साउन कानुनको धज्जी उडाउदै खोला दोहन गरे ।
अझ रोचक कुरा चाँहि के हो भने, प्रदेश सरकारको पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का लगाएको पथरी–जाँते–ज्यामिरे सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि पौडेलले नै पाएका छन् । आफैले निर्माण गर्नुपर्ने सडकमा खोलाको दोहन गरेर सडक पुर्दा पनि स्थानीय प्रशासन भने बेखबर छ ।
यस विषयमा पौडेल भने स्थानीयको अनुरोधमा ३० टिप गिटी खोलाबाट निकालेर लगाएको बताउछन् । पौडेलले भने स्टकबाटै हालिदिन्छु भनेको थिएँ ।साथीहरू मान्नु भएन, उहाँहरुले जवरजस्ती गरेपछि ३० ट्रिफर गिट्टी हालिदिएको हुँ ।’ तर,पौडेलकै कर्मचारी निर्मल चौहान भने ६० हाइवा गिट्टी खोलाबाट निकालेको बताउछन् । चौहानले भने ‘६० गाडी निकालेको हो । बाँकी मलाई पनि थाहा छैन् ।’ यसरी हेर्दा यहाँ खोलाको चरम दोहन भएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
यस विषयमा मन चोकका स्थानीय भने २ सय हाइवा गिटी निकालेको दावी गर्छन् । स्थानीय एक युवाले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ‘बाटामा एम्बुलेन्स पनि गुड्न छोड्यो । जेसिवि फस्न थाल्यो, बाटो हिलाम्मे भए पछि पौडेलका गाडी सञ्चालनमा रोक लगायौं ।’ तर, पौडेलले हामी स्थानीयलाई सिरानी लगाएर चरम खोला उत्खनन् गर्नुभयो । हामीलाई बाटो राम्रो चाहिएको हो तर, उहाँले कानुन मिचेर मध्य साउनमा खोलामा स्कावेटर चलाउनु भयो ।’
दादागिरी शैलीमा खोलामा स्कावेटर चलाउँदा समेत स्थानीय सरकार भने बेखर छ । बाटो साच्चिकै विग्रीएको भएकाले २,४ गाडी निकालेर पुरेको भनेको सुनेको तर विस्तृतमा आफुलाई पनि थाहा नभएको वडा नं. ९ का अध्यक्ष कृष्ण लइटेलले बताए । यस विषयमा जानकारहरुका अनुसार १ टिप हाइवामा १८ घनमिटर गिटी जान्छ । १ टिपर गिटीको हालको चलनचल्तीको मुल्य १६ हजार छ । यसरी हेर्दा २ सय टिपर गिटीबाट पौडेलले ३२ लाख मुल्य बराबरको खोला दोहन गरेर गिटी निकालेको प्रष्ट हुन्छ । त्यो पनि आफैले निर्माणको जिम्मा पाएको सडकमा ।
यति मात्रै हैन पौडेलले २ दिन सम्म लगातार खोलामा स्काभेटर चलाएको स्थानीयहरु बताउछन् । २ दिनमा पौडेलले २ करोड बढीको गिटी उत्खन्न गरेको स्थानीय व्यावसायीहरु बताउछन् । यसरी मध्य वर्षको समयमा कारोडौँको खोला दोहन हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन रहनुको रहस्य कतै सबैको मिलेमतो त हैन् ? प्रश्न खडा भएको छ ।
रासायनिक मल विक्री वितरणका लागि सूचना
मुख्य सचिवमा शंकरदास वैरागी नियुक्त, युवराज खतिवडा अमेरिकाका राजदूत
प्रधानमन्त्रीद्वारा जैविक विविधता संरक्षणका लागि दृढताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड
सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा अलपत्र महिलाको उद्धार